I-Chakra Linux Descartes iyatholakala ukulanda | Kusuka kuLinux
I-Chakra Linux Descartes iyatholakala ukulanda
yezimg | | Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Sanibonani bantu beLinuxera, lokhu okuthunyelwe ukukwazisa ukuthi sekuvele kukhona I-Chakra Linux Descartes, futhi njengoba silapha ngikushiya namathiphu.
Okokuqala isikhangiso oficial, Ngizothatha ukuhumusha okwenzile Isithunzi sendiza enophephela emhlane (ibhulogi esincoma ukuyifunda) futhi siyabonga ngokuhunyushwa.
1 Isimemezelo Esisemthethweni seChakra Linux Descartes
2 Izixhumanisi ezibalulekile
3 Dala i-USB Ebukhoma
4 I-YAPA: Izilungiselelo Ezengeziwe Zokuzikhethela
5 Yenza kusebenze ikhosombe [okungeziwe]
6 Qala iseshini "engenalutho"
Isimemezelo Esisemthethweni seChakra Linux Descartes
«Ithimba leChakra liyaziqhenya ngokwethula uhlelo lokuqala lwe-Descartes series, olubhangqwe nokukhishwa kwe-KDE 4.13. Sijabule ngokufakwa kwesethi entsha yobuciko, umsebenzi we Isilonda, ngegama Sirius. Umuzwa wonke we-Chakra ulungiswe kahle, kusuka kutimu ye-GRUB kuya kudeskithophu ye-KDE.
Okwamanje, ngokungeziwe, uChakra uthuthele kwiseva entsha. Lokhu kube nomthelela omkhulu kubasebenzisi bethu kanye nohlaka lwethu lwangaphakathi.. Sibeke umzamo omkhulu wokuthuthukisa amathuluzi ethu, okuholela ekutheni manje asebenze ngokwengeziwe, futhi kube lula ukuwanakekela. Izinhlelo zethu zokwakha zithole izithuthukisi eziningana futhi izinqolobane zethu sezikulungele ukuthuthela ku-Akabei, umphathi omusha wamaphakeji esihlela ukuwethula kungekudala.
Futhi, sibonga ukusebenzisana phakathi kwethimba leChakra ne-arnt (umakhi we-Octopi, isikhombimsebenzisi sokuqhafaza se-pacman), siyajabula ukumemezela ukuthi imfoloko ebesiyisebenzisa kuze kube manje, i-Oktopi, ihlanganiswe nenguqulo yakamuva ye-Octopi. Lokhu kuzozuzisa abasebenzisi bethu, ngoba bazokwazi ukusizakala ngakho konke ukuthuthuka okwenziwa "phezulu".
Le nguqulo entsha yeChakra ifaka phakathi ukuthuthuka nokuvuselelwa okulandelayo:
Ukuhlanganiswa Kwesoftware ye-KDE. I-Chakra ifaka uhlobo lwakamuva oluzinzile lwe-KDE SC, 4.13.1, lapho injini yokusesha yeNepomuk ithathelwe indawo yiBaloo. KwaChakra sidale isichibi esivumela umsebenzisi ukuthi akhubaze iBaloo, kepha iseluleko sethu ukusigcina sinikwe amandla. Sicela ubike uma uthola inkinga ngezinketho ezizenzakalelayo.
Amathuluzi we-Chakra. Amathuluzi ethu ahunyushwe ngokugcwele ngezilimi ezingama-30, ngenxa yomsebenzi omangalisayo wabasebenzisi bethu ku I-Transifex.
Isethi yobuciko. Ilogo entsha yeChakra nezindikimba ezintsha ze- "Sirius" ze-GRUB, KDM, KSplash, Yakuake nesizinda sedeskithophu esisha.
Kumele kuqashelwe ukuthi iphakethe le-catalyst-legacy lisusiwe emakhosombeni njengoba lingasekeli inguqulo entsha yeseva ye-X. Esikhundleni salokho ungasebenzisa umshayeli wamahhala (i-xf86-video-ati), manje enokusekelwa okungcono kwekhadi lasendulo .
Amaphakheji Core. IKernel 3.12.15, i-xorg-server 1.14.5 ne-systemd 212.
Izinhlelo zokusebenza ezintsha ngokuzenzakalela.
i-kcm-pacman-repoeditor (siza ukuhlela amakhosombe we-pacman kusuka ku- "Okuncamelayo Kwesistimu")
I-kcm-about-distro (nayo itholakala ku- "Okuncamelayo Kwesistimu" futhi ikhombisa isifinyezo esifushane sohlelo nokufakwa)
I-Kup (isixazululo esilula esinamandla kodwa esinamandla esisebenzisa i-rsync kanye / noma i-bup ukwenza zombili izipele ezikhulayo nezivumelanisiwe)
Indawo yokugcina eyengeziwe, ekhutshazwa ngokuzenzakalela, inikeza izinhlelo zokusebenza ezibalulekile ze-GTK nokuncika kwazo. Ukuyisebenzisa, sebenzisa i-kcm-pacman-repoeditor (Isihleli Sezinqolobane seChakra ku- "Izintandokazi Zesistimu") noma i-Octopi. Imiyalo yokwenza lolu shintsho ngesandla ingatholakala kulokhu umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo. Ngeminye imininingwane, thintana ne- ukuphatha izinqolobane kumadokhumenti.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi isifaki sethu seTribe asikasekeli ngokusemthethweni i-UEFI, RAID, LVM noma I-GPTYize ungathola izixazululo ezithangamini zethu. Ukwenza imidiya yokufaka ethembekile, landela ifayela le- imiyalo ye-wiki. Izithombe ze-Chakra iso azisekeli i-unetbootin, futhi ama-DVD kufanele enziwe ngejubane elisheshayo kune-4x.«
Dala i-USB Ebukhoma
I-Linux: Umbhali Wezithombe (Suse Studio Imagewriter)
I-YAPA: Izilungiselelo Ezengeziwe Zokuzikhethela
Amasethingi angezansi awokuzithandela OKUKHETHEKILE, imvamisa asuselwa kokuncamelayo kwami
Yenza kusebenze okugciniwe [okungeziwe]
Leli khosombe, njengoba sekushiwo, liqukethe izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu ze-GTK. Ukuyisebenzisa, siya ku-Chakra Linux Descartes ithuluzi lokuhlela izinqolobane (Izintandokazi Zesistimu -> Isihleli Samarekhodi E-Chakra) bese sikhetha indawo yokugcina eyengeziwe (esithombeni sami sesithombe-skrini uzobona futhi ukuthi indawo yokuhlola iyavela (njengoba ngisegatsheni lokuhlola leChakra) kanye nendawo yalo yokugcina i-x11tete11x)
Qala iseshini "engenalutho"
Mane nje uma ucisha umshini bese uvula futhi, ukuze uma ungena ngemvume, uqale uhlanzekile, okungukuthi, ungavuli izinto ebengizishiye zivulekile lapho ngicisha umshini, yingakho Izintandokazi Zesistimu -> Ukuqalisa Nokucima -> Ukuphathwa Kweseshini bese uhlola inketho ehambisanayo
Ngokunikwa inkululeko esiphiwa yiChakra Linux Descartes, futhi ngemuva kokufakwa, yenza noma yini esifuna ngayo, enye yezinto engikhanga kakhulu ukuba nayo okugcinwa kwendawo ngamaphakeji ami, ngokulandela isixhumanisi ungabona ukuthi ungayifaka kanjani eyodwa.
Njengamanje ngine- indawo yokugcina de I-PKGBUILDS ukuze I-Chakra Linux lapho ngifaka khona ama-pkgbuilds aguqulwe yimina, futhi kwesinye isikhathi nginezimagqabhagqabha zento engiyidalile (njenge-patch yezithonjana zebha yamathuluzi kusethi ye-KFaenza), ngezansi ngizokhombisa ukuthi ngingawafaka kanjani amaphakheji avela kule ndawo yokugcina izinto.
1) Faka i-git:
2) Iya ekhasini lokugcina bese ukhetha iphakheji, ngokwesibonelo engizolikhetha i-asciinema
Sifaka iphakheji esiyifunayo
Sikopisha ikheli le-HTTPS
3) Hlanganisa: Ukusuka lapha ngizokhombisa izindlela ezi-2, eyokuqala kuzoba ukukhiqiza iphakheji kusuka kuyo siyithola nge-git, bese kuthi eyesibili, uyihlanganise necebo lokuba nendawo yokugcina izinto yasendaweni
A) Ifomu Lokuqala ("Ibhukwana")
B) Indlela Yesibili (Kusetshenziswa okugcinwa kwendawo)
Ekugcineni, ngoba abanye abasebenzisi baphawule ukuthi i-linuxtracker ayinakufakwa, ngishiya isixhumanisi se-.torrent esilayishwe ebhokisini lami lokudonsa
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-Chakra Linux Descartes iyatholakala ukulanda
Amazwana ayi-87, shiya okwakho
Ukwethulwa okuhle, ukuhalalisela kwami ​​kuqhubekele eqenjini leChakra
Ngokwami ​​futhi uma ngiqhathanisa neKaOS kungaba emuva, ngoba iChakra uma iqhathaniswa neKaOS iletha "engasasebenzi" amaphakheji abalulekile ohlelo. Bona i-kernel, i-mesa, i-xorg-server, i-intel ihluzo labashayeli njll.
Lokhu, yiqiniso, kungukuzibamba komuntu siqu, ejwayele kabi ukuthi iKaOS kufanele sihlale sisesikhathini njalo.
Ngaleso sizathu, ngilahla iChakra.
ndoda, kepha awuqondanga lutho hahaha, lowo umcabango nje, iChakra yiHalf Rolling, iCore ye-distro igcinwa ngezinguqulo ezinhle kakhulu, futhi ideskithophu ye-KDE iRolling ngokuphelele
Impela lokho, ubuhle beChakra …… ..
Sekuvele kuhlu lokulanda. Siyabonga ngolwazi x11tete11x
Yilokho ebengizophawula ngakho. Uma kungeyona i-100% Rolling, ayiqedi ukungishayela ucingo. Umbuzo owodwa, angazi ukuthi ngifunde kuphi ukuthi i-chackra inezinkinga eziningi. Iqiniso?
Besekunesikhathi eside bethwele kanzima ngoba badinga abantu abaningi. Esikhathini esithile esedlule ilungu elibalulekile leqembu kwakudingeka lihambe ngenxa yezinkinga zomuntu siqu, futhi ngaphandle kokuqhubeka, iKaos yadalwa ngumuntu owashiya i-Chakra. Kuyihlazo, ngoba yi-distro engiyithandayo kakhulu futhi bengiyazi kusukela ezinsukwini lapho kwakuyi-KDEmod ye-arch linux, ngaphambi kokwethula i-chakra.
ingasasebenzi? Yebo, sengizizame zombili futhi ngisele ne-chakra namaphakeji ayo "asephelelwe yisikhathi" kepha azinze kaningana kunama-kaos. Ukube benginenhlobo ethile yenkinga ngamaphakeji angasebenzi, bengiya ku-arch, kokubili amaphakheji amasha kanye nevolumu, ehlushwa yi-kaos.
Ngezizathu ezinjengokungazinzi nokushoda okukhulu kwamaphakeji, ngilahla ama-kaos.
Ngikhwehlela kahle nge-chakra, yi-distro engiyithandayo, kepha i-kaos engazinzile?
singayithanda noma singayithandi i-kaos kepha ngiyifakile futhi izinzile, okungenani ayikaze inginike ukwehluleka.
izinkinga nge-networkmanager, lapho ibuya ekumisweni ayixhumi i-inthanethi.solution ukuthatha inethiwekhimanager futhi inike amandla i-dhcpcd @ inethiwekhi yakho, engenzeki kimi kunoma iyiphi i-distro nge-systemd.
izinkinga ezifika ngezikhathi ezithile nge-shutdown, kwesinye isikhathi kuthatha ukuvalwa kwemizuzwana emi-5 futhi kwesinye isikhathi kuthatha imizuzu, ngaphandle kwesixazululo.
ezinye izingqinamba zolimi lwezinhlelo zokusebenza, i-masterpdfeditor, i-cantata ne-alpha yakamuva ye-0ad, ayikho indlela yokuthi bashintshe ulimi, iphutha le-qt5? Kungaba, ku-chakra noma kwi-arch bathatha ulimi ngaphandle kwezinkinga.
futhi ngaphandle kokuqamba amakhosombe wokwakha nawoku-kde-alandelayo, abancoma sengathi azinzile kakhulu kunalawo ajwayelekile, kepha kwafika kimina ukuzama i-linux-elandelayo ne-nvidia-elandelayo ngathola isikrini esimnyama esihle.
Kuyabonakala ukuthi awunalo ulwazi ngeKaOS, akekho oncoma ukuthi kwakhiwe futhi kde-okulandelayo kuzinze kakhulu kunezizinzile futhi maqondana nezinye izinto ozibiza ngokuthi ezinye azazi lutho.
Ngihlala ngine-linux-next, futhi ngibe nezinkinga ze-nvidia-next and zero, ukuvala shaqa okuthatha isikhathi eside kunokudingekile kwenzeka ngokusebenzisa izingqikithi ezisuka kuma-icnos angaphandle kuya ku-KaOS, into ye-cantata yi-QT5 (inemvumelwano) angisakwazi landela ukuthi ufake obomvu
hamba uthengise izithuthuthu kusekethe, i-kaos ukusatshalaliswa okususelwa kunkohliso futhi, ngokuqondakalayo, kwi-chakra enengqikithi, izithonjana nezizinda ezithile ezinhle kodwa akwenzeki lapho. Kungani ucasha ngokuthi inezicelo ezimbalwa ngoba zenziwa futhi zenzelwe ama-kaos? ngoba awusho nje ukuthi unjiniyela akanaso isikhathi noma isifiso sokubeka amaphakheji amaningi noma amadola okuqasha ngaphezu kwamaseva ama-3.
Ukuthi awunankinga noma wazi ukuthi ungazilungisa kanjani futhi uzivale akusho ukuthi thina sonke asinazo. ukuvalwa kuhlobene nezithonjana zangaphandle? woza, hamba ufunde izindaba ezinganeni. futhi into ye-cantata yiphutha le-qt5, akunjalo? Uma uhlelo lokusebenza lungashintshi ulimi noma lungahambi kahle ku-kaos, kuhlala kuyiphutha le-qt5, noma kunjalo.
Ngisebenzisa i-ArchLinux futhi angizange ngibe nayo yalezi zinkinga. Ngizamile i-KaOS (kumishini ebonakalayo ne-LiveCD) futhi angikaze ngibe nezinkinga futhi. Kepha ndoda, ungathukutheli, ukuthi akusebenzeli akusho ukuthi ngokunye kuyafana.
I- @entel KaOS ayisekelwe ku-Arch, ukuphela kwento eyabelana no-Arch yi-pacman, empeleni ukwakheka kokufaka amaphakheji kufana kakhulu ne-Debian
I-LOL kodwa ngabe uzibikile izimbungulu? Ngalokhu le Yakha, ukuhlola nokubika izimbungulu uma kukhona nokuthi azidluli esitebeleni.
Ngenhlanhla i-kaos ngiyitholile izinzile nge-100% futhi ngenxa yabakha ababika izimbungulu.
Ekugcineni sigcine sikhuluma ngama-kaos ne-chakra yayingemuva.
Ukungazinzi ku-KaOS? Uzamile noma ukhulumela i-movie oyibonile muva nje?
Futhi ukungabikho kwamaphakeji kubukeka kahle, nginokuningi, kuya ngezidingo zalowo nalowo.
I-KaOS njengamanje iyi-distro esesikhathini kakhulu, ngisho nangaphezu kwe-Arch, futhi ezinze kakhudlwana.
Uzinzile ngaphakathi kokugcina, ayikho i-distro esondela kulokho, futhi manje uphuza ubisi lwakho nge-colacao bese ulala….
Noma ngubani ogawula ugarliki uyadla, zenzele utshani futhi noma yini ephumayo uxubha amazinyo akho.
Uma ungakuthandi ukugxekwa kwama-kaos wakho othandekayo, uziklina. ngasendleleni, uma yinhle kangaka, kwenzeka kanjani ukuthi ibhulogi yakho evela kulokho kusatshalaliswa ishiywe bese uya ku-ante?
Kubukeka sengathi awungilandeli, angikaze ngiyisuse i-KaOS, uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuba nama-partitions amaningi ukuze ube nama-distros amaningi? kahle lokho.
Ngabe uthole noma ngasondela?
Futhi isihogo sizoyenzani ngokuba nama-partitions amaningi nalokho engikutshele khona? vuma, ungabi ngumqambimanga futhi wazi ukuthi manje njengoba usuthole ama-antergos akuphonsa kakhulu kunama-kaos, njengalokho okwenzeka kuwe osukwini lwakho nge-manjaro, owathengisa njengokudlula konke.
Ake sibheke ukuthi silinganisa ulimi 😉
ngiyaxolisa ngalolu limi, kepha kuyangithinta ekhaleni ukuthi indaba yezindaba mayelana ne-chakra noma i-manjaro noma yini ephumayo nalabo abavela emnyangweni wezokukhangisa nokumaketha we-kaos baphuma bathi yiyona ehamba phambili emhlabeni.
Kepha iqiniso lokuthi kuwe akulona, ​​akusho ukuthi kwabanye kuyafana. Kufanele nihloniphe umbono womunye nomunye.
Ukubona usho ukuthi "i-kaos ukusatshalaliswa okususelwa phezulu" ngayeka ukufunda ngoba ngibona ukuthi "ilungele ukudoba noma ukuthengiswa"
Ngendlela, sihlangana kuphi, ngenza utshani noma ngizothengisa izithuthuthu kusekethe? Kuyinkinga kanjani ukungazi ukuthi wenzeni, lokhu kungaphili: - /
Yize manje sengicabanga ngakho, ngingenza zombili ngasikhathi sinye. Ukuthengisa izithuthuthu ngenkathi ngizenzela utshani, ngingakha isikole.
PS: fap fap fap brum brum brummm… ..
Impikiswano yakho enkulu, i-kaos isuselwa ku-arch kanye ne-chakra, okwenzekayo ukuthi abanye benu bafana nalabo be-ubuntu ababatshela ukuthi bususelwa ku-debian futhi baphinda izikhathi eziyinkulungwane kuze kube yilapho ukholwa.
Kunenqubekela phambili kakhulu ukusho ukuthi ukusatshalaliswa kudaliwe kusuka ekuqaleni futhi kuyacaca ukuthi kumane nje kuyi-arch esebenza kuphela ngama-bits angama-64, i-qt kanye nesisekelo sephakeji esingenangqondo, kepha lokho uma kwenziwa "yi-kaos ne-kaos».
Futhi uxubha amazinyo akho ngemuva kwe-fap, fap.
Enye into ngombono nge-chakra kanti enye ukuthi ayisasebenzi futhi nokuthi i-kaos ingcono. Futhi, izindaba yi-chakra hhayi i-kaos, lapho i-kaos ngithola iso elisha bese wena uthola izindaba bese sizophawula ngama-kaos, woza ngithi kufanele kube njalo.
Noma mhlawumbe kungcono ukusho ukuthi bah, i-chakra iyamunya, okungcono kakhulu yilokho engikusebenzisayo.
@entel, ngiyaphinda, i-KaOS ayisekelwe ku-Arch isebenzisa kuphela umphathi wayo wephakeji, njenge-Frugalware http://kaosx.us/faq-es/#KaOS_no_es_otra_distribucin_basada_en_ArchEn_qu_se_diferencia_con_Chakra
Uma ufunda isigaba sokugcina uzobona ukuthi kungani ngithi kufana noDebian kune-Archlinux
Ithani elincane abalithathayo lisusa itshe kimi ... bese ungangibizi ngomashiqela ngokuthumela imibono kuphondo ... sengivele ngakususa okuningana, kunzima kangaka ukuphikisana ngaphandle kokuba isilima ngokuphelele ? Futhi iya ku- @entel nakuwe futhi, Yoyo, ngiyazi wena futhi ngiyazi ukuthi uxoshwa ngokushesha… yenza isibonelo, khululeka.
ukhokhela ukukhangisa okukhanyisa amabele akhe i-XD
U-Ainus Solheim kusho
I-Antergos (arch) ikunikeza izinkinga nge-shutter, iShutter iyangisebenzela kuma-antergos, lokho kungasho ukuthi kuwena ayizinzile, futhi kimi izinzile, ngisebenzisa ama-antergo nsuku zonke, futhi angibanga nankinga.
ngakho-ke ukuzinza kohlelo kuhlobene.
Phendula ku-Ainus Solheim
kepha lokho akusona isihlobo, kusobala.
I- @entel "ayijabulisi", isenenkani ukuthi iKaOS isuselwe ku-Arch futhi ayiyi nakuwebhusayithi yephrojekthi ukubona imibhalo esemthethweni.
I-Ingorance ishibhile futhi @entel uthole okunikezwayo okuhle kakhulu.
Ngendlela, angizange ngiqale ukuhlanekezela ngeKaOS, ngathi kuphela ukuthi ayisebenzi kimi NGOKWAMI ngoba izobuyela emuva iphasela. KIMI uqobo, hhayi ezingeni elijwayelekile lakho konke.
Futhi ngiqale ukuphawula kwami ​​kokuqala nge
«Ukwethulwa okuhle kakhulu, ngihalalisela iThimba leChakra ngokuqhubeka»
Njengoba ukwazi ukubona, @entel, ngemfundo hhayi njengawe, uthuka indlwabu nokuxubha amazinyo ngesidoda.
Ngoba ukhuphula izinga lakho lokweyisa kimi naseKaOS ngeke ulunge ngokwengeziwe.
"Uma isiwula sibamba uthango, uma singaludabuli, sisishiya lapho"
Ngabe uzonginika izifundo zakho zemfundo?
Ngubani oseqalile ukungahloniphi?
"Uzamile noma ukhulumela i-movie oyibone maduzane?"
»Manje usuphuza ubisi nge- colacao bese uyolala ...»
ukuphikisana okuhle okwakho, ikakhulukazi ngokuvalwa nezimpawu, lapho-ke uthi ukungazi.
by the way, akuyona izindaba zokuqala zenye ukusatshalaliswa obeka kuzo ama-kaos.
kuwena kungathi "Lapho isiwula silandela umngcele, umngcele uyaphela bese isiwula siqhubeka."
"Manje usuphuza ubisi nge-colacao bese uyolala ..."
Lokho wukungahloniphi, kuphi ukudelelwa?
"Zenzele utshani futhi noma yini ephuma uzoxubha amazinyo akho."
Kubonakala kimi ukuthi leyo bukkake oyinikezela kimi inengeka kakhulu kunobisi olunecolacao, akunjalo?
Futhi kuthiwani ngezithonjana, pa "quetenteres" ukuthi ngibonile ukuthi kuya ngohlobo lwezithonjana onazo, lapho uchofoza kuzo eHomerun, kuthatha ngaphezulu noma kancane ukuqala kabusha, i-smartass.
Ngendlela, ngezimpelasonto ingabe uyi-troll efanayo noma kuphela phakathi nesonto? Ngabe bayazi ekhaya?
YEBO, lokho kuwukungahloniphi futhi usuqalile, smartass.
hahaha, unganeliseki ngokusola izithonjana, manje usola u-homerun. Ekuhlukanisweni okungu-5 okunezithonjana ezahlukahlukene nakuwo wonke ama-homerun akuhluleki, kuma-kaos kuyenzeka, noma ngabe kubuhlungu kangakanani.
«By the way, ngezimpelasonto ingabe uyi-troll efanayo noma kuphela phakathi nesonto? Ngabe bayazi ekhaya? »Bese uthi inhlonipho, mzenzisi.
Kubo bonke laba futhi ngibeka umbono wami etafuleni, kubaluleke ngani uma i-yoyo ithanda uChakra noma cha noma uma kusabonakala kuwe ukuthi i-KaOs isuselwe ku-Arch? Ngabe lokho kuzoshintsha noma yikuphi kwalokhu?
Damn it gentlemen, ake nibheke ukuthi nicabanga kancane futhi nishiye izimpi zenu, ukuthi i-DL akuyona indandatho yesibhakela yanoma ngubani, into ngotshani nezithuthuthu ayisebenzi futhi sengithole imibono emi-5 ngokulinganisela kubantu abangenayo uyamthanda uYoyo ... Uyayibona inkunzi abayidalela into engenangqondo? Gqoka amadoda amancane manje.
@entel, qhubeka usho ukuthi ama-KaOs asuselwa ku-Arch, noma nakuDebian uma ufuna! Angiyiboni inkinga yokuthi usho futhi ukukholelwe lokho, kuyimpilo yakho nenhloko yakho, kepha yeka ukubhebhana nengxabano yomuntu siqu ebekwe lapha.
@Yoyo, ngiyazi ukuthi uyayithanda i-distro yakho ngokungakholeki, ngicabanga ukuthi kuhle, kepha yini okufanele uyikhombise enye? Yishiye manje, umudlulise futhi ukudlulise futhi manje ... ungafaki umsebenzi omningi kimi naku- @ Elage izimpi zobuwula.
Ngiyabonga, baluthando <3
ngiyaxolisa nano nabanye abahlaziyi, engxenyeni yami ngivale ukuphawula, cha, sengishiye eyodwa …… ..benginale nguqulo entsha ye-chakra izinsuku ezimbili futhi okwamanje ngimuhle impela, ngaphandle kwephepha lodonga elizenzakalelayo, kubi yini noma kubukeka kanjalo kimi?
Ngiyaluthanda udonga, alubi kabi kangako, mhlawumbe i-xD encane enganambitheki
Konke okunye, ungakhathazeki.
Ngikhetha izikhathi eziyinkulungwane i-Half Rolling distro kune-100% eyodwa, angidingi ukuba ngisesikhathini ngoba ayilethi nzuzo yangempela futhi iyingozi ngandlela thile
Awudingi ukuba usesikhathini futhi angidingi ukuba semuva….
Izidingo ezahlukahlukene…. wozani nibone.
Ukulahlwa Kulahlwa: O
^ __ ^ ngijabule njengesibungu nge-chakra yami yokulahla.
Bengilokhu ngisebenzisa i-Chakra cishe iminyaka eyi-2 futhi ngisajabule. Angiwuthandi umsebenzi omusha wobuciko, ngicabanga ukuthi ubuncane bungena ekhanda lawo wonke umuntu, ngakho-ke ngizogcina iDharma i-grub, kdm ne-ksplash. OkwePlasma ngizoqhubeka noMoya.
1.I-chromiun ku-linux ifana nensimbi? (okungukuthi, ngokususelwa kukhodi yomthombo kepha kususwa ikhodi yokuhlola)
2. ngiyifaka kanjani i-ayina ku-arch? Sengivele ngiyilandile kepha ayisebenzi
Awafani, ngoba i-Chromium idalwe ngumnyango we-Google wokuthuthukisa isiphequluli esishiwoyo nemfoloko yaso yokuhweba, eyi-Google Chrome; ne-Iron, iyi-Chromium eyenziwe ukuze ingasekelwa yi-Google futhi ayihlangene ngalutho nohlelo lokuvumelanisa lwe-Google.
i-iron basusa YONKE ikhodi yokuhlola KUSUKA ku-chrome
KUNGANI i-chromiun ku-linux ingenzi okufanayo nensimbi?
Ngokuyinhloko ngoba i-Chromium inakekelwa yi-google futhi iyindawo yokudlala yonjiniyela.
I-Chromium kaChakra ine-twist ethokozisayo: ifaka isibuki se-PDF se-Chrome ne-Flash plugin ukuze ube nazo zonke izici ezenza i-Chrome ikhetheke ngaphandle kwezinkinga zokuphepha i-Chrome enazo.
Kuhle. Ngaphandle kwalokho, kulabo abasebenzisa i-KDE, i-interface iyamanzi impela. Kodwa-ke, ngithanda ukwenza ngezifiso i-interface ngemuva kokufaka i-distro ye-GNU / Linux enemidwebo engangifaneli (ngiyaxolisa, kepha angisithandi isikhombimsebenzisi se-Chakra samanje se-KDE).
Sekudlule amasonto ambalwa bengifuna ukufinyelela kule distro ukuyivivinya, kepha yonke imizamo yami yokufinyelela kusayithi ye-chakraos.org ukuyilanda ibe yize.
Uma lokhu kusatshalaliswa kusebenza njengesiza sakho kungishiya nginokungabaza okukhulu.
I-distro isebenza kahle kakhulu, inkinga yamaseva inzima kakhulu, abafana abaluniki unyawo ngebhola, manje omunye wama-Chakra devs, uthukuthele ngokusingathwa kwamanje, futhi kubonakala sengathi bazoshintsha futhi https://groups.google.com/forum/#!topic/chakra-devel/sfwduw1Hf2U
Konke ukwesekwa kwami ​​ngesinqumo sokushintsha ukusingathwa, inyanga engu-1 isimo asibekezeleleki. Uzobheka okuthile ku-CCR futhi ... kuseva phansi, izolo kwenzeke kimi.
Inkinga ukusingathwa, i-ChakraOS VPS ithola ukuhlaselwa okuningi kwansuku zonke nokuhlaselwa yizikhukhula okungafanele ikuthole ngoba ayimiselwe nesiza seChakra.
Basezingxoxweni zokufudukela kokunye ukusingathwa okungenazinkinga noma i-datacenter.
Yize ngisebenzise i-KDE ku-distro elula efana ne-arch linux kubonakala kimi ukuthi konakalisa ubulula nobuhle be-arch, kimi ngiyisebenzise ngenxa yokushoda kwezinsizakusebenza njengoba uKubuntu ehamba kancane uma eqhathaniswa, kepha konakele.
Angikuzwisanga ukuphawula kwakho, kepha uma uyazi ukuthi wenzani, noma ikuphi ulungile Kubuntu 12.10 32 bits: http://i.imgur.com/txXXEe2.png
Yebo, inkinga enginayo ngeKubuntu ukuthi ihamba kancane, kepha akudingeki ukuthi uyibone inqama, kune-4gb ongayigcina, uma kungenjalo isikhathi sokuvula izinhlelo, ukugqwayiza okungahambi kahle (i-radeon 5770) ngizamile ukukushintsha opengl 1.3 / 2/3 native / rasterized, the best is rasterised opengl 2, lezi yizinto ezincane ezingenza ngizwe ubuntu obuncane,
Ngisho nokukhulisa ijubane lokugqwayiza okuzwakalayo kunamathele, angazi ukuthi benzani kuleyo "flagship" KDE distro, kepha kushiya kungathandeka okungenani ama-LTS amabili engiwahlolile (10.04 no-14.04). Lapho ngibona khona uKubuntu curdle ngokusobala kulapho uhudula iwindi ngakwesobunxele, bese uya phezulu, bese ngakwesokudla (ngokushesha okukhulu), lokhu ukwenza iwindi lilingane kwesokudla / esigcwele isikrini / kwesobunxele, Ikhiya kabi .. Angazi noma kuzoba njalo yini kwi-chakra kepha i-distro inzima kakhulu
bheka ikhawunta ye-fps iwela phansi kakhulu kulokho, okungenani kimi
Yebo, inkinga enginayo ngeKubuntu ukuthi ihamba kancane, kepha akudingeki ukuthi uyibone inqama, kunenqwaba ye-4gb, uma kungesona isikhathi sokuvula izinhlelo, hhayi ukugqwayiza okunamanzi (radeon 5770) Ngizamile ukuguqula i-opengl 1.3 / 2/3 native / rasterized, the best is rasterised opengl 2, yizinto ezincane ezingenza ngingathandi ukubuntu,
UJuan Cruz kusho
Sengivele ngiyilandile futhi nginayo ku-pendrive, ngilinde ukuqeda ngezingxenye ezithile ngoba ngifuna ukuyifaka.
Okwamanje ngineManjaro kanye nokwahlukanisa nge-W & /% $ # kwezinto ezifana nalezi hehe.
Phendula uJuan Cruz
konke kuhle kakhulu kepha azikho izinguqulo zama-bits angama-32, awekho ama-kaos noma ama-chakra.
Okwamanje ngiyaqhubeka ne-manjaro kuzo zombili i-kde ne-openbox… ..
Ama-bits angama-10 abekhona iminyaka eyishumi, kungenzeka ukuthi iprosesa lakho lisekele ama-bits angama-64 ...
lscpu | imodi ye-grep "CPU op (mode)"
ukwazi ukuthi iprosesa lakho lisekela ama-bits angama-64 .. noma kungenjalo ungathumela imodeli
Ngincamela izingcezu ezingama-32 ukuze kungadingeki ukuphinda imitapo yolwazi, ngabe unayo i-chakra multilib? futhi izicelo zisebenzisa inqama encane, futhi ngama-bits angama-64 ibona i-3.9gb ngenkathi ine-pae 4.0gb ... futhi akukho inzuzo enkulu yokusebenza okungenani hhayi yokusetshenziswa kwansuku zonke http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=ubuntu_1404_x64&num=1
UFelipe, uma uChakra enama-multilib, angiqondanga, ukhetha izingcezwana ezingama-32 (uthi kukhona "inzuzo encane"), kepha kusixhumanisi osibeka izingcezu ezingama-64 siyidla siluhlaza siye kuzingcezu ezingama-32 ngokusebenza xD, njengoba bekulindelekile ... (angazi ukuthi wenze izivivinyo ezingaki, kepha ngalezi engizenzile, ngiyakuqinisekisa ukuthi ungawubona umehluko)
yini lokhu noma okubonayo ... ama-bits angama-64 lapho usebenzisa izingcezu ezingama-64 zobude bamagama abona kuze kube kuhlaka lwethiyori lwabangu-16 (uma ngingenaphutha) ...
futhi kusobala ukuthi isebenzisa inqama eyengeziwe, isebenzisa ububanzi bamagama obuphindwe kabili ... okwenza ikwazi ukucubungula esimweni esikahle ngokuphindwe kabili kunalokho okusetshenzwa yi-OS engama-32-bit emjikelezweni owodwa.
kepha izinhlelo zokusebenza lapho kushanela khona ama-64 kungamabhentshi ejwayelekile noma izinhlelo zokusebenza ezingasetshenziswa muntu. Okungenani emidlalweni kuyefana.
i-postmark enqobayo kepha noma kunjalo kukhona ukuhlehla (okungenani ku-Ubuntu) ku-12.04.4 inokusebenza okuphezulu kune-14.04
@felipe bengingeke ngigomele "ukuthi akekho umuntu oyisebenzisayo" ngaphandle kokuqhubeka nokuhlolwa .. futhi okushilo ngemidlalo akulona iqiniso, ngingakutshela ngokuhlangenwe nakho kwami ​​kumawindi anencwajana ye-hp ene-turion x2 ne-nvidia 8200M, ene ama-win7 32 bits i-Dragon Age ngqo lapho uqala umdlalo unamathele, ngokuwina ama-bits angama-7 64, ngingawudlala kuma-FPS ayi-7-12 (kusobala ukuthi bekungadlaleki kepha ngamangala ukuthi kusukela ekwenzekeni kokumiswa yiqhwa kwenzeka ukuthi "waphonswa" lokho kukhuluma kakhulu ngokuthi ngabe usebenzisa i-32-bit noma i-64-bit ... kufanele kuqashelwe ukuthi iminyaka yedrako ngumdlalo wama-32-bit ... okungukuthi, ngisho nama-64-bit ayichithile i-32-bit kuyo field yakho ..) Sekuvele kumlando, iminyaka eyi-32 izingcezu ezingama-10 bezikhona.
Musa ukudida ibhasi ledatha nebhasi lekheli ...
@felipe sengivele ngiyazi .. Ngiyazi ukuthi ibhasi ledatha linamabhithi amaningi .. kepha noma kunjalo, ngoba emshinini ofanayo umdlalo ofanayo uma ugijima ngokuwina izingcezu ezingama-7 64 hhayi ama-win7 32 bits?, ngiyaphikelela, ama-64 ama-bits anika ukusebenza okuningi kunalokho esicabanga.
Ngalesi sikhathi angivumelani neyoyo, Kusesikhathini samanje kune-arch? Ngiyacela, ukuthi i-firefox ifike ngaphambili ngoba i-anka izoyipakisha akusho ukuthi ifika ngaphambili, futhi ngicabanga ukuthi sengivele ngikukhombisile ngesinye isikhathi ngenkathi ushicilela okwakudala, ngaphandle nje kuhhavini eKaos kolunye uhlelo ngenkathi ku-arch phuma futhi kwaba nokubuyekezwa okukodwa ngaphambili, kusuka eKaos. Angikhumbuli ukuthi kwakuwuhlelo luni.
Kepha ukusho ukuthi ngisesikhathini futhi ngifonele iChakra kanye namaphakeji angasebenzi asephelelwe yisikhathi kubonakala kuyichilo futhi kungenangqondo kimi. nokwakhiwa kwamaphakeji we-kaos kuyikhophi yekhabhoni ye-arch, ngoba lapho ngiphakamisa i-ocenaudio pkgbuild yami ebuyekeziwe e-Aur, ngokuyisisekelo ibibukeka kakhulu njengesakhiwo se-kaos build osiphakamise ngokushesha.
ngokuthembeka kwezinye izinhlelo ezibalulekile izofika ngaphambi kwesikhathi, kepha kwezinye hhayi, kanti ezinye azikho. njengoSteam.
Ngiyakuhlonipha ukuthi uyayithanda iKaos, kepha ngicabanga ukuthi bekungamazwana abaluleke kakhulu ukudicilela phansi amanye ama-distros. kepha ngiyakutshela njengozakwethu, okufanayo ngikunikeza isizathu kwezinye izikhathi njengakulesi ... angikuniki sona.
Zibophezele ngeSonto eledlule ngokwesibonelo:
Bese kuthi ngoMsombuluko e-Arch:
Ngubani okopisha ubani?
Kuthiwani ngento enkulu efana ne-Qt5? I-PKGBUILD elula, ehlanzekile esetshenziswe ku-KaOS ngokwakha kusuka kuma-submodles:
Akunankinga yokungathandi i-KaOS, kepha thola amaqiniso ngaphambi kokuthumela ukuthukwa okunje.
Kuhle! Ngine-manjaro enebhokisi lokuvula ku-acer yami efisa eyodwa ene-athomu ye-Intel, ngimusha lapha ..
Ngabe izosebenza kahle kwi-laptop yami encane? Ngiyabonga Salu2
Ilungele i-chakra, siyakuhalalisela manje nesiphepho sesidlulile.
Ngijabule ngeKaos ...
Ngikhetha izikhathi eziyi-100000 iManjaro, iChackra ijwayele ukuphuka njalo ...
... sawubona, ngizothi sawubona bese ngithi ngihleke kakhulu ekuhlaselweni kokuziqhenya ne-versionitis phakathi kwe-chakareros nama-kaosino, hhayi ngaphandle kwabanye abacibishelayo. Lapho umuntu esebenzisa i-debian sid indlela yeZen icacile futhi izinhliziyo zethu zihleka konke.
UMikhael Santos Fernandez kusho
Um ... Awu ... XD. Izinto zokuqala kuqala: Angijwayelene neze nezinto eziningi, ngineminyaka engu-15 ubudala, futhi ngifuna ukukhipha uKubuntu, ukuze ngifake iChakra -nguqulo yayo yakamuva-.
Umbuzo wami uthi: Ngenqubo yokufaka i-Chakra, ingabe ngithola inketho yokufaka i-Chakra esikhundleni se-Kubuntu?
(Ngifakele iWindows kanye neKubuntu, ngamahlukaniswa ahlukene)
Phendula uMikhael Santos Fernández
Yebo, engxenyeni lapho ikucela ukuthi ukhethe ukwahlukanisa, khetha ukwahlukanisa lapho ufake khona Ubuntu bese uhlola inketho yefomethi. Qaphela ukuthi ungenzi ukwahlukanisa okungalungile ngoba kuzosula konke onakho kukho.
Isebenziseka kakhulu futhi ithembeke kakhulu ku-KDE distro engiyithandayo futhi engikuleyo nguqulo phakathi kweChakra ne-ArchLinux (cela i-hard drive yami haha).
Isipelingi esizilungise kahle nge-GNU / Linux: Amathuluzi wokubhala kahle
Ukufaka iRedmine 2.4.0 kuDebian 7